नेपालीले कामका लागि जापान जान नपाउने !
सरकारको लापरबाहीका कारण नेपाली कामदारका लागि जापानको रोजगारी गुम्ने खतरा उत्पन्न भएको छ । प्राविधिक प्रशिक्षार्थी तालिम कार्यक्रमअन्तर्गत विदेशी कामदार ल्याउने जापान सरकारको नयाँ व्यवस्थाअनुसार दुई मुलुकबीच सम्झौता हुन नसक्दा रोजगारीको अवसर गुम्ने अवस्था सिर्जना भएको हो । सन् १९९३ यता जापानले नेपालसहित चीन, इन्डोनेसिया, भियतनाम, फिलिपिन्स, थाइल्यान्ड, पेरु, लाओस,
नेपालबाट युरोपमा मानव तस्करी : १० लाख खर्च, २५ हजार कमाइ पोल्यान्ड र चेक रिपब्लिकका गल्ली-गल्लीमा
वैदेशिक रोजगारीका लागि युरोपियन देश नेपाली युवाहरुका लागि ‘ड्रिम’ हुन सक्छ। लाखौं खर्च गरेर त्यहाँ पुग्ने नेपालीको संख्या यसरी बढिरहेको छ कि मेनपावरमा पैसाको चलखेल मात्र होइन नेताहरुकै ‘सोर्सफोर्स’सम्म चल्ने गर्छ। युरोपको रोजगारीमा आकर्षण देखिए पनि वास्तविक अवस्था भने खाडी मुलुकभन्दा भयावह छ। १० लाख रुपैयाँसम्म खर्च गरेर मेनपावरमार्फत नै
अमेरिका भयो डर लाग्दो घटना, सबै नेपाली रुवाबासी !
अमेरिकामा नेपाली बस्दै आएको अपार्टमेन्टमा भीषण आगलागी भएको छ । टेक्ससको ईभिगंस्थित अपार्टमेण्टमा आगलागी भएको हो । दुईओटा अपार्टमेण्टबाट ५ जना नेपाली सकुशल बताइएको छ । नेपाली समाज टेक्सस (एनएसटी)का अध्यक्ष सुमन थापाका अनुसार शुक्रवार बिहान वाटररिटड्जस्थित पायोनियर पार्कवेमा भएको उक्त आगलागीमा करिब २० वटा अपार्टमेण्ट ध्वस्त भएका थिए ।
इन्डोनेसीयाली प्रहरीको इन्काउण्टर.., जहाँ नेपाली मारिए
इण्डोनेसियाली प्रहरी इन्काउण्टरमा नेपाली नागरिक शरण कुमार तामाङ मारिएका छन् । नेपाली दुतावासका द्धितीय सचीव प्रेमराज गौतमका अनुसार मृतक तामाङ सेम्जोङ ७, धादिङका बासिन्दा हुन् । इण्डोनेसियाको जकार्तास्थित होटल अल्पलाइनमा बसेर लागूऔषध धन्दा चलाउँदै आएका तामाङलाई ग्राहक बनेर त्यहाँ पुगेको प्रहरीले जनवरी १२ मा पक्रेको थियो। उनलाई पक्राउ गरि थप
सुतेकै अवस्थामा दुबईमा नेपाली युवाको मृत्यु भएपछि यस्तो भयो
वैदेशिक रोजगारीका क्रममा संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) पुगेका सुनकोशी गाउँपालिकास्थित यमुनाडाँडाका २७ वर्षीय अमृत श्रेष्ठको मृत्यु भएको छ। बिहीबार राति मफ्रकस्थित आफ्नै कम्पनीको क्याम्पमा सुतिरहेको अवस्थामा उनको मृत्यु भएको पारिवारिक स्रोतले बताएकाे छ। रोजगारीका लागि विदेश गएको ५५ दिन मात्रै भएको उनको परिवारिक स्रोतले जनाएको छ। एकै कोठामा बस्ने मोरक्कन सहकर्मीका
माईत गएर घर नफर्कने श्रीमतीसंग सम्वन्ध विच्छेद गर्दा मैले श्रीमतिलाई अंश दिनुपर्छ की पर्दैन ? यस्तो छ कानुनी ब्यबस्था
प्रश्नः मेरो नाम कृष्ण श्रेष्ठ हो । म हाल युएईमा छु । मेरो घरमा श्रीमतिले अढाई बर्षको बच्चा लिएर कुनै जानकारी नदिई माईत गएर बसेकी छिन् । यसअघि पनि उनले पटक पटक यस्तै गर्दै आएकी छन् । मैले उनलाई घर फर्किन आग्रह गर्दा नआउने र सँगै नबस्ने कुरा गर्छिन ।
श्रीमान बितेपछि पाँचजना सन्तानको – भाग्य बदल्ने त्यो खसी !
श्रीमान बितेपछि पाँचजना सन्तानको पालनपोषणको जिम्मा उनको काँधमा आइपुग्यो । आफैले रोजेको खसम भारतीय थिए । नेपालमा जग्गा जमिन हुने कुरै भएन । गर्नु के ? ‘बिहान –बिहान साग बेच्न थालेँ, तर साग बोक्ने डोको पनि थिएन, ऋण पत्याउनु त परेको कुरा !’, पोखरा रामबजार निवासी जानु कपुरले अतित सम्झँदै भनिन्,‘बेस्सरी
उहाँको मन झस्किन्छ । ‘कतै छोरालाई केहि त भएन ?’ ‘एक मनले सोच्छ बुहारीलाई पो सताएको हो कि ।’ निरमायाले आशाका साथ भन्नुभयो ।आमालाई मात्र हैन श्रीमती शान्ति दराईलाई पनि श्रीमान् रिसाएर घरमा फोन नगरेको हो कि जस्तो लाग्छ । ‘उनले म निदाएको बेला राति फोन गरेका थिए त्यसैले मैले
बिदेशमा तरुनी भेटियो भन्दैमा हुरुक्क भएर ”सेक्स” नगर्नुस यस्तै होला नि सेयर गर्नुस है ताकी बिदेशमा बस्नेलाई उपयोगी होस्
काठमाडौं । सिंगापुरसँग सीमाना जोडिएको मलेसियाको जोहोरबारु शहरमा बिदेशी प्रेमिकासंग मस्ती गर्दागर्दै एक नेपालीको ज्यान गएको छ । जोहोरबारुको नुसाजयास्थित एक होटलमा आफ्नी भियतनामी प्रेमीकासित मस्ती गर्दागर्दै उनको ज्यान गएको हो । उमेरले आफुभन्दा करिब १५ बर्षले कान्छी २४ बषिर्य भियतनामी प्रेमीका लिएर त्यहाँको बजेट होटलमा पुगेका हरिबहादुर मगरको सम्भोग सकेपछि
पुस २५ – सन् २०१७ मा सबैभन्दा धेरै नेपालीले ज्यान गुमाएका छन् । गएका सालहरुको तुलनामा यो वर्ष रोजगारीका लागि यहाँ आएका धेरै नेपालीले ज्यान गुमाएका हुन् । सन् २०१७ मा युएईमा ८४ जना नेपाली कामदारको ज्यान गएको छ । ज्यान गुमाउने मध्ये ७६ जना पुरुष र ८ जना